ငါတို့မသိသောဘုရားသခင် | The Unknown God | Real Conversion
၂၀၁၂၊ စက်တင်ဘာလ၂၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း
အသင်းတော်၊ စနေနေ့ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော
အတူတကွ မတ်တပ်ရပ်ကြပါစို့။ ကနေ့ည သင်တို့အားလုံးကို တမန်တော်အခန်း ကြီး၁၇၊ အပိုဒ်ငယ်၂၂က အစပြု၍ဖတ်စေလိုပါသည်။ ၎င်းကျမ်းကို စကောဖီးလ်ကျမ်းစာ အုပ်၏စာမျက်နှာ ၁၁၇၃တွင် ရှိသည်။
“ထိုအခါပေါလုသည် အာရေတောင်ပေါ်၌ ရပ်လျက်၊ အချင်းအာသင် လူတို့၊ သင်တို့သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၌ နတ်ဘုရားတို့ကို အလွန်ရိုသေတတ်ကြသည်ကို ငါမြင်ပါ၏။-လမ်း၌ သွား၍ သင်တို့၏ ဘုရားများကိုကြည့်ရှုသည်တွင်၊ ငါတို့မသိသော ဘုရားသခင်အဘို့ဟူ၍ အက္ခရာတင်သော ယဇ်ပလ္လင်တခုကိုတွေ့ပါ၏။ သင်တို့သည် မသိဘဲလျက်ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်၏ အကြာင်းကို ငါဟောပြော ၏။-လောကဓာတ်မှစ၍ လောကဓာတ်၌ ရှိလေသမျှသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသောအရှင် ဖြစ်၍၊ လူတို့လက်ဖြင့် လုပ်သောဗိမာန်၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသည်မဟုတ်။ -ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသော သူတို့ အားဇီ၀အသက်နှင့်တကွ ထွက်သက်ဝင်သက်မှစ၍ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို ပေးတော်မူသော အရှင်ဖြစ်၍၊ တစုံတခုကို အလိုတော်ရှိ သကဲ့သို့ လူတို့လက်ဖြင့် ကျွေးမွေးခြင်းကို ခံတော်မူသည်မဟုတ်။-ဘုရားသခင်သည် မြေတပြင်လုံး၌ နေရသော လူအမျိုးမျိုးတို့ကို
တသွေးတည်းနှင့် ဖန်ဆင်းတော်မူ၍၊ သူတို့အား ခွဲဝေစီမံသော အချိန်ကာလကို၎င်း၊ သူတို့၏ နေရာအပိုင်းအခြားကို၎င်း မှတ်သားတော် မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာစမ်းသဖြင့် တွေ့ကောင်တွေ့ကြလိမ့်မည် အကြောင်းတည်း။ သို့ဆိုသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့တွင် အဘယ်သူနှင့်မျှဝေးတော်မူသည်မဟုတ်။-ငါတို့သည် ဘုရားသခင်အားဖြင့် အသက်ရှင်လျက်၊ လှုပ်ရှားလျက်၊ ဖြစ်လျက်ရှိကြ၏။ထိုသို့နှင့်အညီ၊ သင်တို့တွင် လင်္ကာဆရာ အချို့တို့ က၊ ငါတို့သည်ကား၊ နွယ်တော်သားပင်၊ ဘုရားမျိုးပေး၊ ဖြစ်ကြလေဟု စပ်ဆိုသတည်း။ ထိုသို့ နှင့်အညီ၊ သင်တို့တွင် လင်္ကာဆရာ အချို့တို့က၊ ငါတို့သည်ကား၊ နွယ်တော်သားပင်၊ ဘုရားမျိုးပေ၊ ဖြစ်ကြလေဟု စပ်ဆို သတည်း။ ထိုသို့ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမျိုးအနွယ်ဖြစ် လျက်နှင့်၊ လူတို့အတတ် အကြံအစည်အားဖြင့် ထုလုပ်သော ရွှေရုပ်တု၊ ငွေရုပ်တု၊ ကျောက်ရုပ်တုနှင့် ဘုရားသခင် တူတော်မူသည်ဟု မထင်မမှတ်အပ်။-ဘုရားသခင်သည် မိုက်မဲသော အချိန်ကာလတို့ကို အမှုမထားဘူးသော်လည်း၊ ယခုမှာ ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍ နောင်တရကြ လော့ဟု ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌ရှိ သောလူအပေါင်းတို့အား ပညတ်တော်မူ၏-အကြောင်းမူကား၊ ခန့်ထားတော်မူသော သူအားဖြင့် လောကီသားတို့ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီ လျော်စွာ စစ်ကြောစီရင်မည့်နေ့ရက်ကို ချိန်းချက်တော်မူပြီ။ ထိုသူကို သေခြင်းမှ ထမြောက် စေတော်မူသောအားဖြင့် ခပ်သိမ်းသော လူတို့အား ယုံလောက်သော သက်သေပြတော်မူပြီဟု ပေါလုဟောပြော၏။ သေသောသူတို့၏ ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းကို ကြားရလျှင်၊ အချို့တို့ သည်ကဲ့ရဲ့ကြ၏။အချို့တို့က၊ ဤအမှုမှာ သင်၏ စကားကိုငါတို့သည်
နောက်တဖန် နားထောင်ဦးမည်ဟု ဆိုကြ၏။-ထိုသို့ဆိုကြသောအခါ ပေါလုသည် ထိုသူတို့အထဲမှ ထွက်သွားလေ၏။-လူအချို့တို့သည် ပေါလု၌ မှီဝဲဆည်းကပ်၍ ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ထိုသူတို့အဝင် ဒယောနုသိ အမည်ရှိသော အာရေတောင် မင်းတယောက်၊ ဒမာရိအမည် ရှိသော မိန်းမတယောက်မှစ၍အခြားသောသူရှိကြ၏ (တမန်၁၇း၂၂-၃၄)။
တမန်တော် ရှင်ပေါလုသည်၊ ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသမြို့သို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ အေသင်မြို့သည် ရှေ့ခေတ်ပညာရေး မြင့်မား၍ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောမြို့ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကျော် အာရိစတိုတယ်လ်၊ ပလဲတို၊ ဆိုကရစ်တီးတို့နေထိုင်ခဲ့သော မြို့ပင်ဖြစ် သည်။ ရှင်ပေါလုသည် အေသင်မြို့မှ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသူသည် အာရေ တောင်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်တုန်းက၊ ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့် သားတို့နှင့်အတူ အစ္စရေးနိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့စဉ်က၊ တဆက်တည်း အာရေတောင်ပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရောက်ခဲ့ဘူးပါသည်။ အာရေတောင်သည် ရာနှင့်ချီသော ရုပ်တု၊ ဆင်းတုများနှင့် ပြည့်နှက်၍ ရှိပါသည်။ ထိုနေရာတွင်၊ ဒသာနိကဗေဒပညာရှင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ “ငါတို့မသိသောဘုရားသခင်” ဟူ၍ အက္ခရာတင် ရေးသား ထားသော ရှင်ပေါလုမြင်ခဲ့သော ယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်း ရုပ်တုများကြား ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့၌ ရုပ်တုဆင်းတုအများ၊ ဘုရားအများ ရှိနေသော်လည်း၊ ထိုသူတို့၏ နှလုံးသားထဲ၌ရှိ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ကိုမူကား မသိကြချေ။ ထိုသူအပေါင်းတို့အား ရှင်ပေါလုသည် သတင်းကောင်း ဝေငှခဲ့ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက “ငါတို့မသိသော ဘုရားသခင်အဖို့ဟူ၍ အက္ခရာတင်သော ယဇ်ပလ္လင်တခုကို တွေ့ပါ၏။ သင်တို့သည် မသိဘဲလျှက် ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်၏ အကြောင်းကို ငါဟော ပြော၏” (တမန်၁၇း၂၃)။
တရုတ်အမျိုးသား ဆောင်းဦးရာသီကာလ လယ်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာ၌ ကနေ့ည၊ စုရုံးကြခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သော အမေရိကား လူတို့က၊ မွန်းကိတ်၊ လကိတ်မုန့်ပွဲတော်ဟူ၍ တင်စားခေါ်ဆိုကြပါသည်။ တရုတ်အမျိုး သားပြက္ခဒိန်အတွက် ဆောင်းဦးရာသီကာလ လယ်သည်အရေးပါသော အားလပ်ရက် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအား လပ်ရက်ပွဲတော်သည် အာရှကမ္ဘာဖြစ်သော၊ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဖိလိပိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားသော အာရှတိုက်သားတို့က ၎င်းပွဲတော်ကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြပါသည်။ ၎င်းပွဲတော်သည် နေပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုချိန်ဖြစ်၍၊ နေလအလုံးဝန်းဆုံး အချိန်၌ ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၈၁၅-၁၈၉၈ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာလစ်ခ်သည် အောက်စပို့တက္ကသိုလ် တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် စာပေဆိုင်ရာ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာလစ်ခ် ပြောကြားသည့်အတိုင်း၊ ရှေ့ခေတ်တရုတ်လူတို့သည် လကို ကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ထိုပါမောက္ခ ပြောပြချက်အရ၊ တရုတ်လူမျိုးတို့သည် (ရှန်တီဟုခေါ်သော၊ ကောင်းကင် ဘုံရှင်၊ ဘုရားတစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒေါက်တာလစ်ခ်သည် ရှန်မင်းဆက်၏ “ပြငှါန်းချက်”ကို ကိုးကားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုမင်းသည် ဘီစီ၂၂၀၇တုန်းက နုန်းထိုင်ခဲ့သော မင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှန်ဘုရင်မင်းမြတ်၏ “ပြငှါန်းချက်”က “သူသည် အထူးသဖြင့် အစဉ်အလာအရ၊ ရှန်တီဟုခေါ်သော ဘုရားသခင်”ကိုသာ ရိုးရာကိုးကွယ်ခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ (James Legge, Ph.D., The Religions of China, Hodder and Stoughton, 1880, pp. 24-၂၅). တရုတ်အမျိုးသားတို့ နှင့်အခြားသော၊ ရှေ့ခေတ်အာရှသားတို့သည် ရှန်တီဟုခေါ်တွင်သော တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကိုသာ ကိုးကွယ်လေ့ရှိကြပါသည်။ ၅၆၃-၄၈၃ဘီစီ၊ ဗုဒ္ဓထက်ပင်စောပါသည်။ ၅၅၁-၄၇၉ဘီစီ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ထက်စောပါသည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ မရောက်လာခင်၊ တရုတ်လူမျိုးတို့သည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကိုသာ ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ ပါသည်။ ရာစုနှစ်များ စွာကျော်လွန်လာသောအခါ ဝိညာဉ်အများကို ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုတိုင်အောင် ရှန်တီ၊ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားဟူ၍ ရှေ့ခေတ်တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုကို လွှမ်းမိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း အာရှသားတို့သည် တစ်ဆူတည်းသော ရှန်တီဘုရားကို မေ့လျှော့ စပြုကြနေပြီဖြစ်သည်။ နောင်တွင် အာရှသားတို့သည် အခြားသော ဘုရားအများနှင့် ဘိုးဘွားတို့၏ ဝိညာဉ်ကိုသာ ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည်လည်း၊ ထာ၀ရဘုရား အထံတော်မှ နောက်လှည့် နေကြပြီဖြစ်သည်။ သမ္မတအိုဘားမား၏ သမ္မတမိတ်ဆက် မိန်းခွန်းပြောကြားရာတွင် “အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံမဟုတ်ပါ”ဟူ၍ မိန်းခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တခါတုန်းက ပြောမိခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ယနေ့တွင် ထိုသို့မဖြစ်ရတောပါဟု ပြောခဲ့သည်။ မစ္စတာအိုဘားမားက ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက ကျင့်သုံးခဲ့သော အမျိုးသား ဆုတောင်းနေ့ကိုပင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဘိုးဘေးတို့ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခဲ့ကြသော ဘုရားကို အချို့သော အမေရိကန်သားတို့ မယုံကြည်ကြတော့ပေ။ ရှေ့ခေတ်တရုတ် အမျိုးသားတို့သည်လည်း ထိုသို့ပင်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်ဘုံရှင်၊ အရှင်ဘုရား ရှန်တီကို အမေရိကန်သားတို့ စွန့်ခွါကြသကဲ့သို့၊ တရုတ်တို့လည်း စွန့်ခွါသွားကြပြီ ဖြစ်သည်။ အာရှတိုက်သားများ ဘုရားကို မသိကြသကဲ့သို့၊ အမေရိကန်တို့လည်း ဘုရားကို မသိကြတော့ပြီ။
ထိုနည်းတူစွာ အေသင်မြို့သားတို့သည် ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင် ထံတော်ပါးက နောက်လှည့်ခဲ့ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူ သည်ကား၊
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိလျှက်ပင်၊ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို လည်းမသိသော စိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏” (ရောမ ၁း၂၁)။
အစမူလကတည်းက ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော အသက်ရှင်သော ဘုရားကို သူတို့မသိကြပြီ။ ရှင်ပေါလုက၊ ထိုသူတို့အား မိန့်တော်မူသည်မှာ ငါတို့မသိသော ဘုရားသခင်ဖို့ဟူ၍ အက္ခရာတင်သော ယဇ်ပုလ္လင်တစ်ခုကို တွေ့ပါ၏။ သင်တို့မသိဘဲ လျှက် ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်၏ အကြောင်းကို ငါဟောပြော၏” (တမန်၁၇း၂၃) ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်။ ထိုသူတို့၌ ရာချီသော ရုပ်တုဆင်းတုများရှိပါသည်။ သို့သော် ထိုသူတို့သည် စစ်မှန်သောဘုရားကို မသိကြချေ။ ထိုသူတို့၌ “ငါတို့မသိဘဲလျက်၊ ကိုးကွယ်သောဘုရား”ဟူ၍ ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုက၊ သင်တို့မသိသော ဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် မြေကြီးတန်ဆာကို ဖန်ဆင်းသူဖြစ်သည်ဟု ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ သင်တို့ မသိသော ဘုရားသခင်သည် “ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အစိုးရသောအရှင်” ဖြစ်သည်ဟု ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုအရှင်သည် လူတို့လက်ဖြင့်လုပ်သော ဗိမာန်တော်၌ ကျိန်းဝပ်မူသည်မဟုတ်ဟု ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက သင်တို့မသိသော ဘုရားသခင်သည်၊ “ကောင်းကင်နှင်မြေကြီးကို အစိုးရသောအရှင်” ရှန်တီဖြစ်သည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ (တမန်၁၇း၂၄)။
အခြားသောဘာသာရေးကို ကိုးကွယ်ဖို့ သင်တို့အား ပြောပြနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ အသစ်အဆန်းဟူ၍ ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ပါ။ ရှေ့ကျသော ဘာသာရေးသာလျှင် ရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်၊ ရှေ့ဧဒင်ဥယျဉ်သို့သာ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသော ဘာသာရေးဖြစ်ကြသော ဗုဒ္ခဘာသာ၊ တောင်အီဇင်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလမ်ဘာသာနှင့် အခြားသောဘာသာတို့ထက် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ရှေးကျလျှက်ရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် ရှန်တီဟူခေါ်သော ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်၍ သင့်မြတ်ဖို့ရာ ကြွလာခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလု၊ မိန့်ကြားသည်မှာ၊
“ထိုအခါ သင်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုမသိ၊ ဣသရေလအပေါင်းတို့၌မဝင်၊ ကတိတော်ပါသော ဋိညာန်တရားတို့နှင့်မဆိုင်၊ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိ၊ လောက၌ ဘုရားမဲ့နေကြသည်ကို၎င်း၊ အောက်မေ့ကြလော့။ သင်တို့သည် အထက်က ဝေးလျှက်ရှိသော်လည်း၊ ယ္ခုမှာ ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍ အသွေးတော်အားဖြင့် အနီးသို့ရောကြပြီ” (ဧဖက်၂း၁၂-၁၃)။
ခရစ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်စေရန် ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကံကောင်း၊မကောင်းဟူသော ယုံကြည်ခံယူချက်၊ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်ခြင်းအား ချိုးဖျက်ရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ငါတို့မသိသောဘုရား” အားပို၍ ရှင်းလင်းစွာ သိစေဖို့ အလို့ငှါ ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။!
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ထိုဘုရားသည် “မြေတစ်ပြင်လုံး၌နေသော လူအမျိုးမျိုး တို့ကို တသွေးတည်းနှင့် ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား”(တမန်၁၇း၂၆)ဟူ၍ မိန့်ကြားခဲ့ပါ သည်။ ယနေ့ည၌လည်း လူမျိုးရေးတင်းမာမှုနှင့် လူတမျိုးနှင့်တမျိုး စစ်တိုက်နေကြမှာ ဖြစ်သည်။ တရုတ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံကြားလည်း တင်းမာနေမည်ဖြစ်သည်။ အီရန်နိုင်ငံနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံကြား၌လည်း လူမျိုးရေး တင်းမာနေမည်ဖြစ်သည်။ ပြသနာအရင်းအမြစ် သည် လူမျိုးရေး တင်းမာနေခြင်းသာ ဖြစ်မည်မဟုတ်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ တင်းမာမှု ဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေး မုန်းတီးရခြင်းကား အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်သည် လူတို့အားလုံးကို “တသွေးတည်း” ဖန်ဆင်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်ကဲ့သို့ ရှင်ပေါလု နားလည်သဘောပေါက် ခဲ့သနည်း? သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြခြင်းကြောင့်သာ ရှင်ပေါလုနားလည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ထောင်တုန်းက ရှင်ပေါလု သိနားလည်ခဲ့သော အရာကို ယနေ့ခေတ် သစ်မျိုးဆက်များ မသိကြတောပေ! မိတ်ဆွေသည် အာဖရိက သွေးဇာတိကို ယူပြီး၊ အမေရိကန် လူဖြူတို့အဖို့ သွေးလှူသွင်းနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေသည် တရုတ်လူမျိုးဖြစ် သော်လည်း ဩစတြေးလျ လူတို့အဖို့ သွေးလှူသွင်းနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ သွေးသွင်းနိုင်ရသနည်း? အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် “မြေတပြင်လုံး၌ နေရသော လူမျိုးမျိုးတို့ကို တသွေးတည်းနှင့် ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်”တမန်၁၇း၂၆။ ထိုကဲ့သို့ ရှင်ပေါလု ဟောကြားသောအခါ၊ အေသင်မြို့၌ရှိ လူတို့အံ့အား သင့်ကြပေ မည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ကြောင့်သာ ထိုသူတို့သည် လူမျိုးရေးခွဲခြားသော ဝါဒီများဖြစ်လာ ကြရသည်။ မိမိတို့သည် တပါးသူတို့ထက် သာလွန်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် အမှားကြီးမှားနေကြသည်။ ငါတို့မသိသော ဘုရားသခင်က လူသားထု တစ်ခု လုံးအဖို့အစ၌ လူယောင်္ကျားတစ်ဦးနှင့် လူမိန်းမတစ်ယောက်ကိုသာ ဖန်ဆင်းခဲ့ပါ သည်။ Dဗြ.ဒီအန်အေစစ်တမ်းအရ အရှေ့အလယ်ပိုင်း လူမျိုးတို့သည် တစ်ဦးတည်း သော မိခင်က ပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ် ၌ ထိုအကြောင်းအရာကို Time တိုင်းမ် ၊မဂ္ဂဇင်းက ဖျောက်ပစ်ခဲ့ပါသည်။ မည်သည့် လူမျိုးနွယ်စုကပင် သင်ဆင်းသက်လာစေကာမူ ပြသနာတော့မရှိပါ။ အာလုံးအတူတူပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သွေးချင်းညီ၊အစ်ကို၊ မောင်နှမတွေဖြစ်ပါသည်! ခရစ်တော်သည် အသင်းတော်အားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ညီတည်းဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ကနေ့ည လူငယ်မောင်မယ်တို့အား ပန်ကြားလိုသည်မှာ၊ တစုံတဦးသည် မည့်သည့် လူ့ဘောင် ယဉ်ကျေးမှုကပင် ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေး၊ အငြင်းမပွါးကြပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်၌ လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက် နေမည်ဆိုလျှင်း! ၎င်းသည် ဇာတိ သဘောပြည့်၀ ခြင်းဖြစ်၍ အခြားသောလူမျိုးများနှင့် မိတ်ဿဟာရဖွဲ့ရန် အခက်တွေ့စေမည်ဖြစ်သည်! မေသည် အမေရိကန်ရောက် စပိန်သူဖြစ်ပြီး အဖေသည် လူဖြူဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်၏ သား ပြောစကားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ “အံ့အားသင့်” ခဲ့ရကြသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ထက်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း၃၀ကျော်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မင်္ဂလာဆောင် အနှစ်၃၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကို လွန်ခဲ့သော ကြာသာပတေးည၌ ကျင်းပပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သား ပြောစကားသည် အသိစိတ်ထဲ အမှန်ပင်ခံစားပါ သည်။ ၎င်းကကျွန်ုပ်အား “အံ့အားသင့်”စေသလို၊ ကျွန်ုပ်အတွက် လောကီဆန်သောအ ရာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်ဇနီးမရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးယဉ်၍မရ ဖြစ်နေပါ သည်! သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဆုကျေးဇူးဖြစ်ပြီး သူ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို နေ့စဉ် ချီးမွမ်းမိပါသည်!
ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌လည်း ဘုရားသခင်က “လူအမျိုးမျိုးတို့ကို တသွေးတည်းနှင့် ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်”(တမန်၁၇း၂၆)။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု၌၊ တရုတ်ပါမောက္ခ၊ သင်းအုပ်ဆရာတပါးထံ ကျွန်ုပ်ရေနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာကို ခံယူခဲ့ခြင်းလည်း လောကီဆန်ဆန် သဘောတရားပင်ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံး လောကီလူသားတို့အဖို့ တစ်စိမ်းဆန်နေပေမည်။ ထိုသူတို့သည် လူမျိုးတမျိုးနှင့် တစ်မျိုးဆန့်ကျင်၍ တိုက်ခိုက်နေကြပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာ ခြင်းသည် လူနှင့်ဘုရား သင့်မြတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ လူမျိုးနွယ်စုအားလုံးတို့အား မိမိ၏ ခန္တာကိုယ် အသင်းတော်၌ တစ်လုံးတစ်၀တည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့ အသင်း တော်၌ တစ်ညီတညွတ်တည်း ဖြစ်သကဲ့သို့ လူမျိုးနွယ်စု အသီးသီးတို့အားလည်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပို့ဆောင်အတူ ပေါင်းစည်းပေးမည်ဖြစ်သည်! အပြစ်က ကျွန်ုပ်တို့အား တဦးနှင့်တဦး စိမ်းကားစေပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က တညီတည်း ပေါင်းစည်ပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့် “အံ့အားသင်ဖွယ်” အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းစည်းပေးမည်ဖြစ်သည်! ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်စွာ အသက်တာ ပြောင်းလဲသောအခါ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်! လွန်ခဲ့သော အပတ်အနည်းငယ်က၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်၏ သမီးငယ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ ဇနီးတို့ သည် ဤအသင်းတော်၌ လူမျိုးနွယ်စုပေါင်းကို ရေတွက်ကြည့်သော အခါတွင်၊ ခြားနားသော လူမျိုးနွယ်စု ၂၀ခန့်ရှိနေပါသည်။ သူကတကယ် အံ့ဩစရာပါလား၊ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာဖို့ ဆက်၍ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ကြပါစို့! ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဖြစ်ကြသည်!ကို လောကီသားတို့မြင်ကြပါစေ! ဤအသင်းတော်သည် ဤကမ္ဘာကြီးနှင့် မတူခြားနား၍ မေတ္တာနှင့်စည်းလုံးပြီ တညီညွတ် တည်း ဂုဏ်ပေါ်လွင်ပါစေ! “အခြားသောသူကိုကူညီမစပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်!
(၁၈၅၅-၁၉၃၄ခုနှစ် ကေရီအီးဘရိတ်ရေးသား သီကုံး၍
တမန်တော် ရှင်ပေါလုက၊ အေသင်မြို့၌ရှိသော လူအပေါင်းတို့အား မိန့်ကြားသည်မှာ၊
“ဘုရားသခင်သည် မိုက်မဲ့သောအချိန်ကာလတို့ကို အမှုမထားဘူး သော်လည်း၊ ယခုမှာ ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍ နောင်တရကြလော့ဟု ခပ်သိမ်းသော အရပ်တို့၌ရှိသော လူအပေါင်းတို့အား ညတ်တော် မူ၏” (တမန်၁၇း၃၀)။
ဘုရားသခင်သည် အတိတ်ကာလ၌ လူတို့၏ မိမိတို့ ကံကျိုးကြောင်း ကြိုးစားအား ထုတ်မှု၊ မိုက်မဲသောကာလကို အမှုမဲ့ထားခဲ့ဘူးသည်။ ယခုတွင် လူမျိုးနွယ်တိုင်းအား နောင်တရရန် အမိန့်ပေးထားပါသည်။ “ယ္ခုမှာကိုယ်အပြစ်ကို မြင်၍ နောင်တရကြလော့” ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ၎င်းသည် အကြံပြု နေခြင်းမဟုတ်တော့ပေ၊ နောင်တရရန် အမိန့်ပေးထားပါသည်! ထိုအရာသည် နုတ်ကပတ်တော်ပင်ဖြစ်သည်! ဘုရားသခင်မိန့် တော်မူသည်ကား “နောင်တရပါဟု မိန့်တော်မူသည်” ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အပြစ်မှ နောင်တ သံဝေဂရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်မှခရစ်တော်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ် လာရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိကိုကို အားကိုးခြင်းမှ ရပ်တန့်ပြီး ခရစ်တော်ဘုရား ကို အားကိုးဖို့ရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည် စစ်မှန်စွာ အသက်တာ ပြောင်းလဲသောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်က၊ သင့်အား လူသစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရစ်တော်ဘုရား ဤလောကသို့ ကြွလာခြင်းသည်၊ သင့်အားအပြစ်ကြောင့် သေခြင်းငရဲမှ ကယ်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အဖို့ကိုယ်စား အသေခံရန်နှင့် အပြစ်အဖိုး အခအတွက် ပေးဆပ်ရန် ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာခဲ့ပါသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင် မျက်မှောက်တော်၌ ဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လိုသောငှါ၊ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ် အသွေးတော် သွန်းလောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ခရစ်တော်သည် မပုပ်စပ်နိုင်သော ခန္တာကိုယ် အသွေးအသားအားဖြင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ယ္ခုတွင် ကောင်းကင်ဘုံ၌ အသက်ရှင်နေပြီး သင့်အဖို့ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့လျှက် ရှိပါသည်။ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော် သခင်ထံတိုးဝင် ချဉ်းကပ်ပါက၊ ထိုစဉ်ခဏ၌ သင်သည် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါသစ် ဖြစ်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်သော အသက်တာထဲ ခရစ်တော်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်း နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား “လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ ရှိလျှင်၊ အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါဖြစ်၏၊ ဟောင်းသော အရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ” (၂ကော၅း၁၇)။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်းသူလူဖြူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက၊ တရုတ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား၊ ကူညီမစသောကြောင့် ထိုတရုတ် အမျိုးသမီးငယ်သည် အသင်းတော်၌ လူသစ်ဖြစ်နေပါပြီ၊ ထိုလူဖြူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်အား ဆုတောင်းပေးရန်ဇယား တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆုတောင်းခံ ဇယား၌ ရေးသားသည်မှာ၊ သဒ္ဒါနည်းလမ်း ကျကျမရှိလှပါ၊ သို့သော် နှစ်သက်ဖွယ်သော ဆုတောင်းခံချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလူဖြူအမျိုးသမီးက၊ “ထိုတရုတ် အမျိုးသမီးသည် ယေရှု၏နွေးထွေး သောမေတ္တာကို ခံစားလိုသည်၊ သို့သော် “ဘုရားကောင်း”ကို မတက်လိုပါဟူသော အချက်ကို ဆုတောင်းပေးဖို့ တောင်းခံထားပါသည်။ ပြည့်စုံပါစေ! အာမင်! ကျွန်ုပ်တို့အ သင်းတော်၌ရှိ လူတို့ကို ကျော်လွန်ပြီး မြင်တတ်ဖို့ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးနေ ပါသည်။ အသက်ရှင်သော ခရစ်တော်ဘုရား၏ မေတ္တာကို သင့်အားခံစားစေလိုပါသည်! အသက်ရှင်တော်မူသော ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ဒုတိယမွေးဖွါးခြင်းခံ ပြီး သေခြင်းမှ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းစေလိုပါသည်!
သေလျှက်နေသော ခရစ်တော်အား ဘုရားသခင်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက် စေတော်မူပြီဟု ရှင်ပေါလုက အေသင်မြို့သားတို့အား မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက အေသင်မြို့သားတို့အား ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်ကြပါ၊ သို့မဟုတ်လျှင် စီရင်ခြင်း ကို ခံရမည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် အသက်ရှင်လျှက် ရှိပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကကို တရားစီရင်ဖို့ရန် ပြန်လည် ကြွရောက်လာမည်ဖြစ် သည်။ မိတ်ဆွေ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? သခင့်အသွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်များကို ဆေးကြော ပြီးပြီလား?
ရှင်ပေါလု၏ အာရေတောင်ပေါ်က ဒေသနာတော်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကား အဘယ်သို့နည်း? ရှင်ပေါလု၏ တရားဒေသနာတော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တုံ့ပြန်မှုသုံးရပ်ရှိ ပါသည်။
“သေသောသူတို့၏ ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းကို ကြားရလျှင်၊ အချို့တို့ သည် ကဲ့ရဲ့ကြ၏ အချို့တို့က၊ ဤအမှုမှာ သင်၏စကားကို ငါတို့သည် နောက်တဖန် နားထောင်အုံးမည်ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုသို့ ဆိုကြသောအခါ ပေါလုသည် ထိုသူတို့အထဲမှ ထွက်သွားလေ၏။ လူအချို့တို့သည် ပေါလု၌ ဆည်းကပ်မှီဝဲ၍ ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ထိုသူတို့ အဝင်ဒယောနုသိ အမည်ရှိသော အာရေတောင်မင်း တစ်ယောက်၊ ဒမာရိအမည်ရှိသော မိန်းမတစ်ယောက်မှစ၍ အခြားသောသူရှိကြ၏” (တမန်၁၇း၃၂-၃၄)။
ထိုသူတို့အထဲက အချို့တို့သည် ကဲ့ရဲ့ကြသည်။ အချို့တို့ကား “နောက်တဖန်နားထောင် ဦးမည်” ဟုပြောခဲ့ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း တရားတော်ကို ထပ်ခါတလဲလဲကြားဖို့ လိုသလို၊ ထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းသုံးသပ်ဖို့ လိုပါသည်။ အချို့တို့မူကား ချက်ချင်းလက်ငင်း ယုံကြည်ကြသဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ကနေ့ည၌ပင် မိတ်ဆွေတို့ သည် တရားတော်ကို ကြားနာ၍ အပြစ်သားဘ၀မှ ယေရှုသခင်ထံ ချဉ်းကပ်လာပြီး၊ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြော သန့်ရှင်းခြင်းခံယူနိုင်ပါရန် ကျွန်ုပ်တို့အထူး ဆုတောင်း ပေးပါသည်။ ထိုစဉ်အခါ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည် သင့်မြတ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်အခါ၊ ရှေ့ခေတ် တရုတ်တို့၏ ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားရှန်တီကို သင်မြည်းစမ်း၊ သိရှိလာမည်ဖြစ်သည်! ခရစ်တော်ယေရှုကို သင်ယုံကြည် ကိုးစားလာရန် တိုက်တွန်းအား ပေးလိုပါသည်။ သင့်တခါတရံတောင်မှ မခံစားဘူးသော ငြိမ်သက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းကို ကိုယ်တော်သည် သင့်အား အမှန်ပေးတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ မနက်ဖန် နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြု အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော် လိုပါသည်။ မနက်ဖန် မနက်၁ဝး၃၀တွင်၊ အခြားသော စားသောက်ပွဲလည်း ဧည့်ခံပေး အုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ တတိယမြောက် စားသောက်ပွဲကိုမူကား မနက်ဖြန် ညနေ၆း၃၀တွင် ဧည့်ခံတည်ခင်းပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မိတ်ဿဟာယဖွဲ့ဖို့ နောက်တဖန် အသင်းတော်သို့ လာလှည့်ကြပါ!
ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့် ထာ၀ရအသက် ရရှိလိုသော သူတို့နှင့်ပြောဆို ဆွေးနွေးဖို့ ကျွန်ုပ်အသင့် ရှိနေပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့ ဘုရားသခင်မစ ကောင်းကြီးပေးပါစေ! အာမင်
-တရားဒေသနာတော်အတွက်၊ ဒေါက်တာ ဂရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ဆုတောင်းပေး ပါသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၇၉၃-၁၈၄၇.ဟန်နရီ အက်ဖ်လိုက်တ် သီကုံးရေးသားသော “ငါ့ဝိညာဉ် ကောင်းကင်အရှင်အား ချီးမွမ်းလော”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။